အုံးအုံးကျက်ကျက် ထဖြစ်ကုန်တယ်။ ။
ရင်ကို တစ်ခါလာမှန်ပြန်တယ်။ ။
ဒီပုံတူပဲ ထွက်လာပြန်တယ်။ ။
အရှုံးတွေနဲ့ သေရာပါမှတ်တမ်းတစ်ခုလို ဖက်တွယ်ရင်း
မစဉ်းစားချင်တော့တဲ့ အတိတ်က ဇာတ်လမ်းတွေ
(မှတ်ချက်။ ။ကဗျာတွေရေးပါဦးလို့ တိုက်တွန်းကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်နှမတွေ ရှိလို့ ချရေးလိုက်ပြန်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပျော်စရာ မဟုတ်ခဲ့ပြန်ဘူး။ :(( ဒါပေမယ့် ဘာပဲပြောပြော စာရေးရမှာ အရမ်းပျင်းနေတဲ့ ကျွန်မကို ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် စပ်ဖြစ်ခဲ့စေတဲ့ အတွက် သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
အချစ်တွေ အငွေ့ပျံချိန်ရာသီခွင်တွေတောင် အရောင်မှိန်ခဲ့တာတော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီ။ ။ကောင်းလိုက်တဲ့ စာသား ..ဂျင်းတို့က မရေးဘူး မရေးဘူးနဲ့ ရေးလိုက်တော့လည်း ခံစားချက်က ပြင်းတယ်ဗျာ ....
ညီမအင်ကြင်း ကတော့ ကဗျာ ဆရာမကြီးလုပ်ဘို့ ကောင်းနေပြီကဗျာလေးက ကောင်းလိုက်တာညီမရေရေးတတ်လိုက်တာနော်ချစ်မမရွှေစင်ဦး
ညီမ ရေမန်တာ ဒါနဲ ဆို၃ခုနော် မရရင် ပြောအုန်း ပြန်လာမန့်မယ် ကိုးနတ်ရှင် က မကောင်းတော့ error တက်တက် သွားတယ်မမရွှေစင်
ညီမရေတခုမပေါ်လို့ အခုပြန်ရေးပေးခဲ့မယ် ကမ္ဘာကြီး တခုလုံး စိုချင်စိုပါစေ လို့ ညီမ ရဲ့ အိပ်ရာ လေးတော့ မစိုစေနဲ့ တော်ကြာရင် ..သြ အထင်မှားသွားမှာစိုးလို့ပါလို့မမရွှေစင်
အလွမ်း ဓာတ်ခံ ရှိတဲ့ ငါအတွက်ခေါင်းအုံးတွေ စိုကုန်ပြီ... အင်ကြင်းရေ...ဟီးးး
နင့်ဘက်ကအမုန်းကြေငြာ စာတမ်းတစ်ခုကိုငါ့အတွက်ကတော့အရှုံးတွေနဲ့ သေရာပါမှတ်တမ်းတစ်ခုလို ဖက်တွယ်ရင်းမစဉ်းစားချင်တော့တဲ့ အတိတ်က ဇာတ်လမ်းတွေဒီမှာလေတစ်ခန်းရပ်လိုက်ကြရအောင်။ ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ စာသားတွေဗျာ တကယ် ဒီကိုပါလာထိတယ်ဗျို့ ရေးသာရေး အားပေးမယ်နော်။ခင်တဲ့(ချိုကျ)
အချစ်တွေ အငွေ့ပျံပြီး ဘယ်သူ့ထံ ရောက်သွားပြန်လဲငါ့ဥာဏ်ရည်က မမှီခဲ့လေတော့မေးရအုံးမယ်ခါချဉ်ကောင်လေးရေခင်တဲ့seesein
သူက အမုန်းကြေငြာစာတမ်း ကပ်ရင် ကိုယ်လည်း ပြန်ပြီး ရှိသမျှ FM တွေက သို့မဟုတ် တီဗွီမှာ ကြော်ငြာလိုက်လေ ဘာပြုလဲ ချစ်ညီမ (မခံနဲ့ကွ အားပေးအားမြှောက်လုပ်ပေးခြင်း) သေရာပါတွေ ဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ဟ
အပေါ်က မြှောက်ပေးသူ မှာ seesein ရှင်ဖြစ်ပါတယ်
Wo Wo! အစ်မကတော့ ရေးချလိုက်ရင် အရှည်ကြီးပဲ ဒါတောင်မှ အတိုချုပ် ချုန်းထားတယ်ထင်တယ်၊ ဒီကဗျာလေးလည်း အရင်ကကဗျာလေးတွေလိုပဲ အတော်ကောင်းတယ်။ ရာသီခွင်တွေတောင် အရောင်မှိန်ခဲ့တာတော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီ။ ။... မီးလုံးသာဆိုရင်တော့ ပင့်ကူအိမ်များခပ်လောက်ပြီထင်တယ်နော်။အဲ့... ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုလည်း နေပူတဲ့နေ့ကျရင် ပြန်လှန်းလိုက်အုန်းနော်။း)ခင်မင်လေးစားလျက်
အိုးသိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါဘဲခံစားချက်ခြင်းတူလို့ထင်ပါတယ်ရင်ထဲကို ငြိခနဲပါဘဲလာလည်သွားတာ ကျေးဇူးပါနော်.. လင့်ချိတ်ထားတာ ခွင့်မတောင်းမိတာ ခွင့်လွှတ်မယ်ထင်ပါတယ်..နောက်လဲ လာလည်ပါဦးမယ်..
ပုံလေးက ကောင်းလိုက်တာ။ ကဗျာလေးလည်း ကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခါကျရင်တော့ အပျော်လေး စပ်ပါဦး ဂျင်ဂျင်းရယ်။ ကဗျာလေးဖတ်ပြီး ပြုံးချင်လို့။း)
သီချင်းလည်းနားထောင်သွားပါတယ်။ ကဗျာလည်းဖတ်သွားပါတယ်၊ ကဗျာကပိုကောင်းတယ်၊ထင်ချင်သလိုသာထင်မြင်ချင်သလိုသာမြင်စေတော့“ရှင်းပြခြင်း” ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားငါမသင်ကြားချင်ဘူးဆိုတာ ထပ်တူခံစားသွားပါတယ်၊
အဟမ်းကဗျာလေးက လန်းလှချည်လားခံစားချက်တွေက ကဗျာအဖြစ် ထွက်ကျလာတာဘဲ ဖြစ်ရမယ်..အားကျတယ်ကွယ်.. တကယ်တို့လဲ ကဗျာ လှလှလေးတွေ စပ်ချင်သေးတယ်ဖီလင်လေးတွေ နည်းနည်းလောက်ငှားပါ..း)အတည်ပြောမယ်နော်ကဗျာလေးအ၇မ်းကောင်းတယ် ညီမလေး ဒီလောက်တော်မှန်း ခုမှသိတော့တယ်..
ညီမလေးရေ... အိပ်ယာတွေစိုကုန်ရင်.....ကောင်းဘူး...အလကားနောက်တာ.... ကဗျာလေးေ၇ာ သီချင်းလေးရော.... မမကြီးဟတ်ထိသွားတယ်.... အဟဲ
ဂျင်းစုတ်ကလေး ကဗျာလေး မိုက်လှ၊ လန်းလှ ချည့်လား...ဘာတွေကို ဒီလောက် လွမ်းနေသတုန်း ပြော့ပြကစမ်းဘာ....:P
ကောင်းလိုက်တာဗျာ ငါပြောချင်နေတာဒီလိုမျိုးပဲလို့တောင် ဖြစ်သွားပါတယ်... တစ်ပုဒ်လုံးဗျာ တစ်ပုဒ်လုံးကြိုက်တယ်ဗျာ... စာသားတွေရော စာသမီးတွေရောပဲ... အားလုံးအားလုံးကိုကြိုက်တယ်ဗျာ ဒါနဲ့စကားမစပ်သီချင်းလေးကလည်းကောင်းတယ်... တိုးတိတ်လွမ်းတာတဲ့ ဟို..ဟို... လုံချည်အသစ်နဲ့ ကားပေါ်တက်လာတဲ့ ကောင်းလေးချောချောလေးကိုလားဟင်.. :Pခစ်....ခစ်.....လေးစားလျက်...
သတိရတဲ့အကြောင်းကပြောင်းကပြန်နဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို စပ်ဆိုတော့ငါ့ဒိုင်ယာရီတွေ ငိုကုန်တာကမ္ဘာကြီးတောင် စိုသွားတယ်။ ။ထင်ချင်သလိုသာထင်မြင်ချင်သလိုသာမြင်စေတော့“ရှင်းပြခြင်း” ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားငါမသင်ကြားချင်ဘူးမတူညီတဲ့ ပုစ္ဆာတွေမှာ အဖြေတွေရှာဖို့ရာလည်းငါ့ဥာဏ်ရည်က မမှီခဲ့လေတော့အချစ်တွေ အငွေ့ပျံချိန်ရာသီခွင်တွေတောင် အရောင်မှိန်ခဲ့တာတော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီ။ ။သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေး အရမ်းအရမ်းကို ထိရှစေတဲ့ ကဗျာလေးး))ဂျင်းရေ ဆက်လုပ်ဟ ရေးချက်က ကောင်းလွန်းတယ် (မှတ်ချက်။ ။ ဗညား(လင်းခေတ်ဒီနို)ရဲ့ကွန်မန့်လေးပါ။ အောက်ကပိုစ့်မှာ မှားရေးခဲ့လို့ ဒီမှာပြောင်းသိမ်းလိုက်တာပါ။)အင်ကြင်းသန့်
ဂလု ဂလု နေအောင်သာ သောက်ချလိုက်ပါ...ပြီးမှ အေ့ ဆိုပြီး လေချဉ်တွေ ထုတ်လိုက်...း)
အဲ့လိုဆို သိပ်လှတဲ့ ကဗျာလေးတွေ ထွက်ကျလာလို့ပါ...(အမကို ရက်စက်တယ်လို့တော့ မပြောပါနဲ့နော်)
what is good things
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ. လာဖတ်သွားပီနော်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
ဂျင်းရေးးးးးဂျင်လည်းကဗျာဆရာမကြီးပါပဲလား ကောင်းလိုက်တဲ့ရေးချက်*ထင်ချင်သလိုသာထင်မြင်ချင်သလိုသာမြင်စေတော့*ရှင်းပြမှနားလည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မရှင်းပြချင်တော့တဲ့မိုးအတွက်တော့ ဒီစာသားလေးကို သဘောကျတယ်။ငယ်ငယ်က အမေက အထင်တွေလွဲဖူးတယ်လေ ခုထိမရှင်းပြခဲ့ဖူးးကဗျာရေးကောင်းတဲ့မမ ပျော်စရာကဗျာလေးရေးပေးပါအုံးနော်သာယာချမ်းမြေ့ပါစေနော်မိုး
ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ဖော်ပြချင်တာလေးကို ထိထိမိမိ မြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးပါပဲ။ကဗျာရေးလည်း ကောင်းတာပါပဲလား စာရေးချင်စိတ်ရှိနေအောင်သာ မွေးမြူသင့်တယ် ထင်တာပါပဲ
ကဗျာလေးကိုလာဖတ်ပြီး အားပေးသွားကြတဲ့ သူငယ်ချင်း မောင်နှမတွေအားလုံးကို အရမ်းအရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျော်စရာကဗျာ မဟုတ်တဲ့ အတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ လာဖတ်တဲ့ သူတွေတော့ မသိဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကတော့ ကိုယ့်ကဗျာကိုယ်ဖတ်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်။း))အင်ကြင်းသန့်
ပို့စ်အသစ်မတွေ့သေးလို့ ဒီမှာပဲရေးလိုက်ပါမယ်..ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ဂျင်ဂျင်း..
သြော်..သူက လွမ်းနေတာကိုး...ခစ်..ခစ်...။ပြေးပြေးလွှားလွှားနဲ့ လာမန့်ရတယ် အင်ကြင်းရေ..။
အရေးကောင်းပြီး အရေးပျင်းတာ တို့ ချစ်မ သေးသေးလေးပါ... အပျင်းမကြီးရန် သတိပေးလိုက်ရသည်... :P
အချစ်တွေ အငွေ့ပျံချိန်ရာသီခွင်တွေတောင် အရောင်မှိန်ခဲ့တာတော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီ။ ။အားပေးသွားတယ် အင်ကြင်းရေ..အခုမှ လာပြီး comment ပေးရင်း တခါထဲ လင့်သွားတယ်နော်..(၃၀)ရက်နေ့မှာ တင်မယ့် ပို့စ်မှာ အင်ကြင်းနာမည်ယူသုံးထားတယ်..လာဖတ်အုံးနော်..
Hey - I am really happy to discove this. cool job!
ဒီကဗျာအရမ်းကြိုက်း) တော်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ညီမလေးး))
"ဥာဏ်အမြင်ကျယ်သော၊ ခေတ်မီသော၊ သဘောထားကြီးသော၊ ကမ္ဘာကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ချင်သော စာဖတ်သူကို အဆင့်မြင့်စာဖတ်သူဟု အကျွန်ုပ်သတ်မှတ်ပါသည်။"ဆန်းလွင် (အရှင်အာဒိစ္စရံသီ)
စာရေးသူတိုင်းသည် ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးနေသူများ ဖြစ်သောကြောင့် တာဝန် အလွန်ကြီးပါသည်။ထိုတာဝန်ကို ကျွန်မတို့သည် ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် ရင်းရမည်။ထိုဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ကျွန်မတို့ ဖတ်သော စာအုပ်များက ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ဂျူး
"ရိုးသားပါ"ရွှေဂုဏ် ငွေဂုဏ်၊ ရာထူးဂုဏ်သည်၊ လူ့ဘုံလောက အကာမျှတည့်၊ သူက ငြူစူ မကြည်ဖြူ၍ခွာယူလိုက ခွာ၍ရ။ရိုးဂုဏ်၊ဖြောင့်ဂုဏ်၊ ယဉ်ကျေးဂုဏ်သည် လူ့ဘုံလောက နှစ်သာရတည့်၊ သူက ငြူစူ မကြည်ဖြူလည်း၊ ခွာယူမရ၊ ကွာမကျ။ ( ဇော်ဂျီ )
ချစ်သော နိုဝင်ဘာ နိုဝင်ဘာကို တကျော့ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ...။ အချိန်တွေက အကုန်မြန်လွယ်လွန်းလှသည်ဟု သူမ ထင်မိသည် ။ သို့ပေမယ့် နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်ခုေ...
ပြီးခဲ့တဲ့လက မြန်မာပြည်ကို ရက်(၂၀)လောက် အလည်ပြန်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ထဲမှာ တိုးတက်နေတာတွေ ဆုတ်ယုတ်နေတာတွေ ဘာဘာညာညာတွေကိုတော့ ဘာမှမပြောလ...
တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာ ဆံပင်ကောက်ရင်ကောက် မကောက်ရင် စိတ်ကောက်တတ်တယ်ဟု ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ တနင်္ဂနွေသမီးဖြစ်ပြီး ဆံပင်ခွေခွေကောက်ကောက်များကို ပိုင...
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး (အပိုင်း ၅)
*အဖွဲ့အစည်းများကို ပုံဖော်ရန် တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်*
အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပြဿနာ၊ အရှေ့တောင်အာရှ ပြဿနာ၊ အရှေ့အနောက်ပြဿနာ အစရှိတဲ့ လက်ရှိ အ...
ကောင်မလေးရေ... နင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် နားမလည်နိုင်ခြင်းက ငါ့ကို ဖမ်းစားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း နင့်ရဲ့ ငါ့အပေါ် သံယောဇဉ်ကို ငါခံစားမိပါရဲ့..။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်...
ယောကျာ်းဆို ကိုယ်ကတော့ မျက်ဆံအနက်ရောင်ပိုင်ဆိုင်တ...
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ ကျင်းပ click
- ၆၈ နှစ်မြောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပ click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပ (ရုပ်သံ)...
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် တောင်ပံလူ ရစ်ဘာရီနှင့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူး ဘန်ဇီးမားတို့သည် အဆိုပါ စွဲချက်အတွက် တရားရုံးတွင် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရမှုကို (၃)နှစ်ကြာေ...
မင်္ဂလာ ညချမ်းလေးဖြစ်ကြပါစေလို့ ဘလော့ မောင်နှမများ၊ စာဖတ်သူများနဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခု အရေးတကြီး Post တင်စရာရှိလာတော့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းရေးခဲ့တဲ့ စာတွေထဲက လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် လောက်က ရေးခဲ့တဲ့ ရီဗျုးဆောင်းပါးလေး တပုဒ်ပါ။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်တွေ အရှိန်အစေ...
fire detection system တွေမှာ အသုံးပြုတတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့၊ fire alarm sensors တွေကို၊ အမျိုးအစားခွဲခြားကြည့်လျှင်၊ smoke detector အုပ်စုမှာ photoelectric type s...
( ၆၈ ) နှစ် မွေးနေ့ ဆုတောင်း
( ၆၈ ) နှစ် မွေးနေ့ ဆုတောင်း www.news.com.au
ကာလ ဒေသ နယ်စည်းမခြားဘဲ
တစ်သားတည်း ဖြစ်စေတာ ကဗျာ
... လို့ ပြောသလို
ကိုယ်တိုင်မှာ ကဗျာများစွာ ဖြစ်ပေါ်စေသူ
* ** **ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပွင့်သော ပန်းတစ်ပွင့်* ရိုးရိုးလေးပါ.....
အပြန်အလှန် နှုတ်မဆက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ တင်းမာလွန်းတဲ့ လက်သီးဆုပ်ထားလိုပါပဲ......
သေနတ်တစ်လက်လောက် ကျမကိုရောင်းပါ.. ချဉ်ချဉ်တူးတူး မုန်းမိနေသော လူတချို့အား ပစ်သတ်ချင်လို့.. သူတို့မရှိလို့ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းသွားမည်မဟုတ်ပေမယ့် ကျမ၏ ရူးလေ...
အပြင်ဘက်တွင် မိုးက စွေနိုင်လွန်းလှသည်။ မိုးရက်ဆက်ရွာနေသည်မှာ တစ်ပတ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ အရင့်အရင်နေ့ရက်တွေတုန်းကတော့ မိုးရေစက်များသည် ကျွန်မကို အမှတ်တမဲ့သာ ကျေ...
[image: Untitled-1]မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်လာကြသည် မြင်တွေ့နေရသလို လူမှုဘဝအကျိုးပြုလုပ်ငန်း များတွင်ကျယ် ထိေ...
မကြာခင်မှာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့ရဲ့ သီတဂူ စက္ခုဒါနဆေးရုံတော်ကြီးမှာ မျက်စိဝေဒနာ ခံစားနေရသူများကို အခမဲ့ စမ်းသပ် ကုသပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလာမဲ့...
ဟိုတလောက မျက်စိနာတာ ကန်ဒီဝတ်နေကျ မျက်ကပ်မှန်ကြောင့်လို့ ထင်တာနဲ့ အဲ့မျက်ကပ်မှန်အဟောင်းကို မတပ်ရဲတော့လို့ အသစ်ထပ်ဝယ်ရတယ် (ကုန်ပါပြီ ပိုက်ပိုက်တွေ >....
Google ရဲ့ မိုးပြံပူဖောငျး Internet
မိုးပျံဖူးဖောင်း အကြောင်းကို အားလုံးကြားပြီးလာ မသိဘူး။ ကျွန်တော်လဲ ကြားတော့ကြားမိပြီး တကယ်အကောင်ထည်ဖော်မယ် မထင်သေးတာ အခု သူတို့က New Zeala...
Number of View: 318 စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဆရာနှင်ကျွန်မ ဆုံဆည်းမှုက စာပေကိစ္စရပ်များမှ စတည်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်။ ဆရာ့၏အမေရိကန်စကားပြောသင်တန်းတွ...
Shans at Homes
စိတ်ပြူတင်းပေါက်တွေကို ငေးမောကြည့်မိတဲ့ တစ်ခဏ
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ထွက်သွားတဲ့ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း အပြီးမှာ တငိုထဲငိုနေတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်မအဒေါ်သတင်းကြားရတော့ စိတ်...
ဥဿဆိုတာ ပစ်ထားလို့မရတဲ့ နေရာ
အားလုံး မင်္ဂလာပါ..။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဦးစွာ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။ ''အသက်တစ်ရာ မနေရဘူး အမှုတစ်ရာ ကြုံရတယ်'' ဆို...
Internet Download Manager 6.15 build 15 (lastest version)
IDM ရဲ့ အခု ချိန်ထိ နောက်ဆုံး Lastest ပါ ... ကျွန်တော် တွေ့နေတာ 6.16 တွေကို တွေ့နေလို့ အဲ့ဒါနဲ့ သေချာလားဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ဆိုဒ်မှာ News ကိုသွားပြီးကြည်...
ဥဿဆိုတာ ပစ်ထားလို့ မရတဲ့နေရာ
အားလုံး မင်္ဂလာပါ..။ ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဦးစွာ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်။ ''အသက်တစ်ရာ မနေရဘူး အမှုတစ်ရာ ကြုံရတယ်'' ဆိုတဲ့ ...
နှစ်ခု မရှိတဲ့ကောင်းကင် နှစ်သံ မထွက်တဲ့ အက္ခရာ နင့် အတွက် ငါချပေါင်းမိတဲ့ စာသားက ရိုးရိုးကလေးပဲ … “…… အယ် .. နာ”။ အဲ့ဒီ တစ်နေ့ကပေါ့ အယ်နာရယ် ငါ အမှတ်တမဲ့ ...
သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ သူ့ဂီတ အတောင်ပံတွေကို ဖြန့်ကျက်ရင်း
ယေဘုယျအားဖြင့် သူမကို မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိဘနှစ်ဦးမှ မွေးဖွားလာသောကြောင့် ဘာသာတရားအပေါ်၌ လေးစားကိုင်းရှိုင်းသော မိန်းမပျိုတစ်ဦးဟု လူအများက ထင်မှတ်...
ပျော်ရွှင်ခဲ့သော ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေနဲ့တဂ်ကြ၊ ရေးကြ၊ c box မှာ အော်ကြနဲ့...တကယ်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတလော စာတွေပြန်ရေးနေပေမဲ့ အရင်လို မသွက်လက်နေတော့ဘူး။ ရေးချင်...
ပိုက်ဆံမရှိသော်လည်း လှူဒါန်းနိုင်သော အလှူ (၇) မျိုး
အခါတစ်ပါး၌ လူငယ်တစ်ယောက်သည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ “အကျွန်ုပ်သည် မည်သည့်အရာကိုပဲလုပ်လုပ်မအောင်မမြင် ဖြစ်နေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် မအောင်မမြင် ဖြစ်ပါသနည်း...
*Pastel on paper by artist Nenad Vuckovic* *မြေကြီးတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲ*တပြန့်တပြော စိမ်းစိုဝေဖြာနေတဲ့ မိသားစုဥယျာဉ်မြေမှာ
*ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ထဲသို့ နတ်နွယ်ရောက်ရှိလာရခြင်းမှာ အစက အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ရန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိခ့ပါ။ စုံထောက်မဂ္ဂဇင်းပိုင်ရှင် ဦးဆန်နီနှင့် မ...
စနေဓမ္မမိတ်ဆွေများအဖွဲ့သက်တမ်း ၂ နှစ်ခန့်ရလာသောအခါ ကျွန်တေ...
ကောင်းတဲ့အချိန်တွေဟာ လွမ်းစရာတွေ ဖြစ်လာပြီး
ဆိုးတဲ့အချိန်တွေဟာ သင်ခန်းစာတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။
“ ပြည်ပနေ နိုင်ငံသားများက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိသည့် လစဉ်ခေါင်းစဉ် အောက်ရှိ ဝင်ငွေစုစုပေါင်းအပေါ် ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေ အမျိုးအစားဖြင့် ပေးဆောင်စေသည့် ဝ...
မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိစီးပွားရေး အခြေနေနဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာ (၂)ပုဒ်
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခရီးစဉ်၊ အခု ဇွန်လဆန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးကျဉ်းပမယ့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ (World Economic Forum)တွေန...
..... အိမ် .....
အိမ်ပြင်ပြီးပါပြီ ၊ အရင်ထည့်ထားသော မိတ်ဆွေများရဲ့လင့်ကျန်ခဲ့ရင် အသိပေးပါ။ တမင်တကာချန်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင် ထည့်တုန်းက ၁၀၀ကျော်တယ်။...
ဒဿရဲ့ နှလုံးသားကို ခြယ်လှယ်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ အချစ်ရဲ့ လက်ပါးစေလား . . . . မျက်လုံး လှလှလေးတွေနဲ့
ငါ့ စိတ်ကို ပွတ်သပ် ဆော့ကစားနေလိုက်တာများ
တစ်မြေထဲနေ တစ်ရေထဲ သောက်ခဲ့သမျှ
ဒီ မျက်နှာတွေ အိုးမဲ အသုတ်ခံရ မှ
ပြလိုက်တဲ့ သတ္တိတွေ အသက်တွေ ဆုံးတဲ့အထိပဲ ……. ။
အောင်နိုင်သူတွေ ရွှေရောင် လွှမ်းလို့ 
သံယောဇဉ် အရောင်တွေ ဖျော့ဖျော့လာတဲ့
ဇွန် ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဘယ်သူလဲ အတိအကျ သိရမယ်
လွှတ်တော်က အရေးတကြီး ကော်မရှင်ဖွဲ့ လိုက်ရှာခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဘယ်သူဆိုတာ သိနေပြီဖြစ်လို့ လာမယ့် ဇွန် ၂၅ ရက်နေ့မှာ အားလုံး သိရအောင် ဖွင့်ချတော့မှာြ...
အမေနဲ့ မတွေ့ ရတာ ၈လလောက်ရှိပြီ။ တနင်္ဂနွေနေ့ ကြရင်တော့
အမေ့အနားကို ကျမပြန်ရောက်ပါမယ်။ သမီးဘယ်တော့လာမှာလဲလို့ 
ဖုန်းဆက်တိုင်းမေးလေ့ရှိတဲ့ အမေ့ကို သမီးပြန်ရောက်ပ...
“No man is island entire of itself; Every man isapiece of the continent,apart of the main;
Ifacold be washe...
ကျွန်တော့်အတွက် ညီအစ်ကိုလိုပေါ့ အ...
ဆွေးစရာ မဟုတ်ပါလေ ... ။ ... ။ ﻿
ပိတောက်တွေပွင့်ပြီ ... ။ ဒီနေ့မနက် အိပ်ရာက န...
(၁၉၉၀) မှတ်မှတ်ရရ ဘ၀စာမျက်နှာ
မေလရောက်တိုင်း ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ တခု ရှိပါတယ်။ အဲဒီဝေဒနာကို မှတ်မှတ်ရရ ဘဝ စာမျက်နှာအဖြစ် ချရေးခဲ့ဖူးတာလေးကို ဘလော့မှာ မှတ်တမ်းတင်ချင်စိတ် ပေါ်လာတာနဲ့ ဘလော့ပို...
စံပယ် စံပယ် စံပယ်ပန်းရယ်
သင်းရနံ့ ကြူ ဖြူဖြူဖွေးတယ် ...
မူမှန် တမင်ပွင့် အဖြူခံ အဆင် နှင့်
အသွင်တင့် ယဉ်ကျေးပါပေတယ် ...
ငွေရည်ငွေသွေး ရိုးရိုးလေးနဲ့ မြ...
ဒီနေ့လည်း စကားများရပါသည်၊ အိမ်မှာတတ်ဆင်ထားသော ကြိုးဖုန်းကို လိုင်းရပ်နားပြီး ကျမကို လက်ကိုင်ဖု...
မြသီလာအလွမ်းပြေ အတွက် အဖုံးနမူနာကို Publisher ကိုဘိုဘိုဝင်း Email ကနေ လှမ်းပို့ချိန်မှာ ကျမက စာသင်ချိန်ဝင်ကာနီး… ။ ဒါနဲ့ ကမန်းကတမ်း facebook ပေါ် ကောက်...
*အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ် ဘယ်လိုကွာသလည်း....*
ဘလော့မှာ ဘာမှ မတင်ရတာကြာလို့ အမေ(ယောက္ခမ) အလည်လာတုံး ကြော်ကျွေးတဲ့ ဘာလချောင်ကြော်နည်းကို မေးပြီး စာရေးတင်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကြော်ရင်လဲ ဒီထဲ နည်းလာကြည့်လ...
ငွေထုတ်သူတိုင်း လက်မှတ်ထိုးရမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ခံစကားကြောင့် ဦးလေးပိုစိတ်ဆိုးမိတော့သည်။ လောပန်ဆီမှာ ဦးလေးပိုအလုပ် လုပ်လာခဲ့တာဖြင့်နှစ်ချို့နေပြီ။ ငွေရေးကြေ...
မိုးကုတ်ဝိပဿနာ တရားစခန်းဝင်တဲ့အခါ နေ့လည်စာမသုံးဆောင်မီ ဒီလို နှလုံးသွင်းပြီးရွတ်ရပါတယ် ။
ဤသည့် စားဖွယ်၊ အမယ်မယ်ကို၊ မြူးရယ်မာန်ကြွ၊ လှပရေဆင်း၊ ပြည့်ဖြိုးခြ...
Burmese Water Festival, Myanmar Thingyan 2013 in London
လန်ဒန်ရှိ မြန်မာများ၏ နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲ နှင့် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲကို Wembley ရှိ Copland Community School တွင် ၁၃ရက်၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၃ နေ့က အောင်မြင...
ကျမအလုပ်ကပြန်တော့ ည11 နာရီပတ်ဝန်းကျင် ..မိုးဖွဲဖွဲလေးကြားထဲ ထီးဆောင်းပြီးပြန်ခဲ...
V1 -(ဘလော့ဂါ မင်းသားကြီး ဘလော့ဂ်ဆိုဒ်တစ်ကာ ရောက်ခဲ့ပြီ...။
ဘယ်ဘလော့ဂ်သူ၊ ဘယ်ဆိုဒ်မှန်းမို့ မသိတော့ ခက်သေးသည်။
မနေ့က ပေးတဲ့ ဘလော့လိပ်စာ...
ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွပ်ထဲက ပင်စင်စား အဖိုးကြီးတွေ အဖွဲ့
တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း လေ့လာရေး အသင်း
ပုံစံမျိုး ဆိုပါတော့။ အမှန်တော့ ဒီအဖွဲ...
facebookCheck out ရာဟု's photos on Facebook.If you sign up for Facebook, you'll be able to stay connected with friends by seeing their photos and videos, s...
အခုနေနေတဲ့တိုက်ရဲ့ အခန်းတစ်ခန်းမှာ စိတ်ရဲ့ကြိုးလေး လွတ်နေသူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ညညဆို အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ထထ အော်တတ်တယ်။ အဲ့ဒီအသံဟာ သူ့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆီက လာသလား၊ ဝမ...
သွားလေရာ ယူပီး ကြုံရာမှာ သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့် VLC Player Portable
Dowmload - http://portableapps.com/VLC Player_portable
Install မလုပ်တတ်လျှင် အောက်ကလင့်မှာ အကူညီယူဖတ်ကြည့်ပါ .
For help getting VLC Portable up and ...
ဥယျာဉ်ဆိုတာလည်း ရူးချင်စရာပါပဲ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရင်းက
လူတွေဟာ မိမိကို တစ်ယောက်ယောက် မင်းဟာခွေးဖြစ်မဲ့အကောင်လို့ ပြောတာခံရ ရင်နာ တတ်သလို၊ ခွေးမြီး ကောက်ကျဉ်ထောက်စွပ်၊ ခွေးကျင့်ခွေးကြံကြံတဲ့ကောင်စသဖြင့် အပြောခံ...
*တစ်*ခုသော ညနေခင်း၌ ဏီလင်းညိုဟူ၍ အွန်လိုင်းတွင် မှုန်ဝါးဝါးအမည်ပေါက်သော ကျွန်ုပ်သည် ကော်ဖီ သောက်ရန်အလို့ငှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့၏။ လက်ဖက်ရည်ဆို...
Lun Swe “ဒီဘုန်းကြီး သိပ်အာက်တန်းကျတယ်လို့ပဲ ခတ်ဆတ်ဆတ်လေး ပြောချင်တယ်။”
by Paukpauk Estateagent on Wednesday, March 6, 2013 at 7:19pm ·
tin Win Akbar likes ...
တရား အားထုတ်တော့မယ် လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ လူတိုင်းလိုလို ထိုကင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး ကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို ရွတ်ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်...
Firefox ရဲ့ add-ons ထဲမှာ ကောင်းမွန်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ Add on တစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Fire shot ဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ Website ရဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို လု...
xx ရက် xx လ xxxx ခုနှစ်
အင်ဒိုနီးရှား ကိုတာဝန် အသစ်နဲ့ မပြောင်း ခင်မှာ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်း တက်ဖို့ အရင်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာလီက ဒန်ပါဆာလေဆိပ်ကို ပထမဦးဆုံး ခြေချ မိတဲ့ အခ...
*မွေးသက္ကရာဇ်* - ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်
*Birth date:* June 19, 1945
*မွေးဖွားရာအရပ်* - ရန်ကုန်၊ မြန်မာ
*Birth place: * R...
ပထမတစ်ယောက်နာမည်က လုံးလုံး။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဝိုင်းဝိုင်း။ တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းသည်။ နောက်ထပ်တစ်ယောက် ထပ်ရှာတော့လဲ ပြားပြား ပဲရောက်လာမလား? ချွန်ချွန်မ...
ဓာတ်ပုံResolution ဆိုဒ်ကြီးနေလို့ လျော့ချချင်ရင် ဒီ exe လေးနဲ့လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
Resolution သာ လျော့သွားပြီး ဓာတ်ပုံရဲ့အရေအသွေး လုံးဝ မပျက်သွားပါဘူး။ *ဒ...
နံနက်ခင်း တက်သစ်စ နေရောင်ခြည် နွေးနွေးက လမ်းကလေးပေါ်တွင် ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် စွန်းပေနေသည်။ ရော်ရွက်ကြွေတို့ ကလဲ လမ်းကလေးပေါ်တွင် ဟိုတစ ဒီတစ ပြန့် ကြဲနေကြ၏။ ...
ကျနော်လက်ရှိ နေထိုင်နေတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုတာ ၁၉၆၅ခုနှစ်မှာ မလေးရှားနိုင်ငံကနေ ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံပိစိလေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူက First World Country လိ...
အကိုရေ တစီးလောက် ကျနော်တို့ဖိုက်လာလို့ လက်မှ တဖက်မှကားကို တိုးရှိုးတောင်ပန်သံနှင့် တားလျှက် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်အနီးတွင် စီးနှင်းလိုက်ပ...
ဒီနေ့ဟာ ၂ နှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ပါ၊ ဘိုလို Cotton Anniversary ခေါ်တယ်ဆိုပဲ။ ၂ နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်က ခဏလေးပါ၊ ပျော်ရွှင်စရာ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ ပေါင်းစုံနဲ့ ဖြတ...
ဒီနည်းလေးက ခဏတဖြုတ်ဆံပင် အရောင်ဆိုးချင်သူတွေအတွက်ပါ။ နဂိုအရောင်ပြန်ရချင်တယ်ဆို ခေါင်းလျှော်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဆံပင်အရောင်ချွတ်စရာမလိုတဲ့အပြင် ဆံပင် ဆိုးဆေး ge...
ကျွန်တော့်မှာ.. နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရှိတယ်..။ သူက.. အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး။ စက်မှုဇုန်က စက်ရုံတစ်ရုံမှာ.. အလုပ်လုပ်တယ်..။ မြန်မာပြည်ရောက်နေတာ အနည်း...
နိုဝင်ဘာကို တကျော့ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ...။ အချိန်တွေက အကုန်မြန်လွယ်လွန်းလှသည်ဟု သူမ ထင်မိသည် ။ သို့ပေမယ့် နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ တစ်ခုသောနိုဝင်ဘာလရဲ့ အဲဒ...
ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံဖွားတွေက အားပေးကြတာ စေတနာနဲ့ *မျက်စိမှိတ် *အားပေးကြတာပါ။ မျက်စိဖွင့်အားပေးရင် လုံးဝ အလုပ်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။
လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ကြားပါရစေ.... ဆန်ဖရန်စစ်စကိုမြို့အနီးအနားမှာ နေကြပြီး မြန်မာ့အရေးကို သံယောဇဉ်အမျှင်မပျက် ချစ်ခင်စေတနာရှိကြသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများ လာမဲ့ နိုဝင...
နှလုံးသားထဲမှာ ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ လက်မှတ်ကလေးတွေရဲ့သက်တမ်းဟာ ရာသီစက်ဝန်းတွေကို ၁၂ကြိမ်တိုင် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီ။
ရေးထိုးစဉ်ကအတိုင်းပဲ မှင်အရောင် မပြောင်းသေးသလို...
ကြည့်မိသော Charity သို့ မဟုတ် အလှူပွဲး ကျင်းပမှူ့ ပွဲးလေး
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အယ်လန်ရဲ့အလှူပွဲး ရန်ပုံငွေပြပွဲးလေး တစ်ခုကို T.V ထိုင်ကြည့်ရင်းက မြင်တွေ့ ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရုတ်သံကနေ အစီအစဉ်...
ကျွန်တော်၏ ဇာတ်လိုက် ကိုလေးဖြူသည် unplugged ရှိုးပွဲတစ်ခု သီဆိုဖျော်ဖြေရန် ဟိုတယ်တစ်ခုရှိ ခန်းမအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာလေသည်။ သို့သော် စားပွဲအသီးသီးတွင် ထ...
အမည် - ရေချမ်း
- တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ (ယခင်)၊ မိုးကြိုးသတင်းစာ။
7 Sep 12, 11:00 AM
*သဲအိစံ*: မရေ. serum ဆိုတာ ဘာလဲဟင်. ဘယ်လိုသုံးရတာလဲ. toner ပြီးရင် လိမ်းရမှာလား. moist.ပြီးမှလိမ်းတာလား. ( Cbox မှာမေးထားတဲ့ ညီမလေ...
ပုံပြင်များထဲတွင် မှော်ဆရာသည် သေဆုံးသူကို အသက် သွင်းနှိုင်သည်ဟု ဆို၏။ ဤသို့ ဆိုလျှင် ကျမသည်လည်း မှော်ဆရာမ ဖြစ်ချေတော့သည်။ ငါးလကျော်ခန့် သေလုဆဲဆဲ ဖြစ်နေသော က...
Reminder: Naing Min Kyaw invited you to join Facebook...
facebookNaing Min Kyaw wants to be your friend on Facebook. No matter how far away you are from friends and family, Facebook can help you stay connected.Ot...
ဗန်မော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး နှင့် အတူ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် ကို ပူဇော်နိုင်ရန် http://www.dhammadownload.com/MP3Library/Bamaw-Sayadaw-Dr-Bha...
‘ကွမ်းအစ်တစ်လုံး…၊ သျှောင်တစ်ထုံးနှင့် ရင်ဖုံးအင်္ကျီ၊ ဖျင်ပင်နီနှင့် ယောထည်ပုဆိုး၊ မင်ကြောင်ထိုးနှင့် အဘိုးက၀ိ ပညာရှိ…’ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘ၀၊ အထက်တန်းက...
ဇောငျး​@ Thinking on the Blog
စာ​တှေမ​ရေွးဖဈတာအ​တျေွာကာသှား​ခဲ့​ပွါပီ။ လူမှု​ရေး​အလုပျ​တှေနဲ့​ဗြာမြား​နေတာွေကာငျ့​မ​ရေွးဖဈတာဆိုရငျ မှနျပါလိမျ့​မယျ။ အခုတဖနျွပနျလညျွပီး​Blog လေး...
ွမနျမာ အက်ခရာတှငျ ဗညျြး​(၃၃) လုံး​ဟူ၍ ရှိပါသညျ။ အဆိုပါ ဗဉျြး​(၃၃) လုံး​အနကျ ဖဦး​ထုပျ (ဖ) ၏ နေရာသညျ နံပါတျ ဘယျ​လောကျမှာ ရှိသလဲ ဆိုလြှငျ​တော့​ရုတျတရကျေ...
အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အရင်လို မအားတော့ပေမဲ့ ဒီနေရာလေးကို လာလာတော့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ မရောက်ဖြစ်တဲ့ နေ့ရက်တွေက များသွားတော့ စီဘောက်မှာ အပေါ်ကို တက်သွားပြီးတေ...
သင်္ကြန်ရောက်တော့မည် ပိတောက်ပန်းများကလည်း ပွင့်ဝေဖို့အတွက် အပင်ထက်မှာ အရှိန်ယူနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်တာမပွင့်တာအသာထား ခူးမည့်သူတွေကတော့ ညတောင်မအိပ် နိုင်ပဲ ...
_.mp3 Listen on Posterous 1 year ago
စိန့် မာတင်အရေးမှသည်>>>>>>ထိုကျွန်းလေးကို အလေးပြုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်>>>>>ရွေမြန်မာ
စိန့် မာတင်အရေးမှသည်>>>>>>ထိုကျွန်းလေးကို အလေးပြုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်>>
စိန့် မာတင် ကျွန်းဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းဝင် ရှင်မဖြူ ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။...
အပြောင်းအလဲ လေတွေ တိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာ တချို့က ရှောင်ရှားဖို့ ကြိုးစားကြတယ် တချို့ကတော့ လေဒဏ် ရေဒဏ်ကို ခံနိုင်မဲ့ အဆောက်အအုံ လေရဟတ် လိုဟာမျိုးကြီးတွေ ကို...
The internet is one of the newest and most effective tools you can use for marketingaproduct oraservice.seo company Whatever it is that you are trying ...
ဒီနေ့ အိမ်သုံး Gas သွားထုတ်တာ ကံကောင်းသွားတယ်။ဒီနေ့တော့ Gas တစ်အိုးမှ ၆၀၀၀ ကျပ်ပဲပေးရပေမယ့် မနက်ဖန်ကျယင် ၁၅၀၀၀ ကျပ်ဈေးတက်မယ်ဆိုပြီး ဒဂုံက ဆိုင်မှာ ကျောက်သင...
ကိုယ့်ဘဝမှာ မျက်ရည်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုပြီး ခံစားနားလည်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေ အများကြီးထဲက တစ်ချို့ကို ဖွင့်ပြောပြချင်နေမိတယ်။
ဟိုးးးးးးးးးတုန်းက ကိုယ့်ကို အရမ်...
ငါ့ သီချင်း ဘယ်သူဆိုတော့မယ်....
ကျနော့်အသက် ၁၈မှာ ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ သိတယ်ဗျာ ...
ငယ်ငယ်ကလေ သူအလွန်လှ ကြွေရုပ်ကလေးနဲ့ တူတယ်ဗျ။
အိမ်နီးခြင်းမို့ ခင်မင်တာ ကျနော့်မှာ ဝမ်းတွေသာ...
သူငယ်ချင်းတွေကိုနည်းနည်းလောက်လေး အကူအညိတောင်းချင်လို့..ဖတ်မိသူတိုင်း ၀ိုင်းစဉ်းစားပြီး မန့်ပေးကြပါနော် ...
အဖြစ်အပျက်တခုကို ကိုယ်သာ သူ ဆိုရင်ဆိုပြီး ပေါ့လေ...
သိန်းနိုင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များတွင် တော်လှန်လှုပ်ရှားမှုများမှာ ဗိုင်းရက်စ်ပိုးကဲ့သို့ပင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လျင်လျင်မြန်မြန် ကူးစက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်...
အင်းပေါခုံရွာတွင် ကိုယ့်ရွာဆီသို့ ဖောင်တော်ဦးဘုရား ကြွရောက်လာမယ့် အကြိုနေ့၌ ရွာသူရွာသားလူငယ်များက ဘုရားဖောင်တော်ကို ကြို မည့် ဆွဲလှေကြီးများကို ငြမ်းခ...
TBS LIVE TELEVISION ( Japanese Version)
လူမုန်းလျှင် ပုန်းလို့ရပေမယ့်..ကံမုန်းလျှင် ပုန်းမရပါ..
မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မိဘ.ဆရာ.အလေးပြုထိုက်သူ စတာတွေဟာ လက်တကမ်းမှာ ရှိနေကြတာပါ. အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တနည်းမဟုတ်တနည်း ပြစ်မှားနေကြ တာတွေ အမျာ...
ကျွန်မမေ့ထားနိုင်ပြီဟုထင်သော အချိန်အပိုင်းအခြားတခုပြည့်သွားပြီ။ကျွန်မရင်ထဲက ခံစားချက်တွေလည်း အနည်ထိုင်ကုန်ပြီဟု ယူဆထားမိသည်။တကယ်တမ်းတော့ ထိုသို့မဟုတ်ပေ။ကျွ...
ငါတို့ ရဲ့ 
Blog ရေးခြင်းနှင့် Blog လည်ခြင်းများကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခက်အခဲများကြောင့် ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်နားပါမည်။
ယိမ်းနွဲ့နွဲ့ အကလေးတွေနဲ့၊ မြစိမ်းရောင...
အတိုက်အခိုက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြတာပဲလေနော့ ။ ကိုယ်ကမှန်မှန် နေပါလျက် ကိုယ့်ကို ပေါ်တင်ကြီး သိသိသာသာ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတုန့် ပြန်မလဲ? အဲဒီအချက်ကို...
အားလုံးသိပြီး ကြတဲ့အတိုင်း မချိုသင်း ၊ မအယ်ဇီ နဲ့ ကိုလူထွေး တို့ ဘလော့ဂါသုံးဦး ဆုံတဲ့အခါ... အမှတ်တရ ကာတွန်းသရုပ်ဖော် တခုလုပ်မယ်လို့ ဟိုးတချိန်တုန်းက တိုင်...
ကျောင်းတက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ laptop လေးနဲ့ အရင်လိုအချိန်ပြည့် မနေနိုင်တော့တာတော့ အမှန်ပါပဲ.. အတန်းကြီးလာလေလေ စာတွေများလာလေလေ ဆိုတဲ့စကားလေးက တဖြည်းဖြည်း မှန်လ...
ဘယ်သူကဘာပြောလို့လဲ တကယ်တော့ ဒီနေ့ဟာလပြည့်နေ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း စိတ်ကူးနဲ့တောင်ပေါ်တက်ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ စေတီခြေရင်းမှာ တကိုယ်တည်းစခန်းသွင်း ခပ်ငယ်ငယ်ကအတွေ...
ချိုးဖြူငှက်လေးတွေ ရှိစေချင်လိုက်တာ့ ။
သမင်တွေ ဒရယ်တွေ ဒဏ်ရာရလို့
"ဘလော့ဂ်ဂါစောင့် နတ်မင်း အတွက်" လောကမှာ အမှားကင်းသူဟူ၍မရှိပါ။အမှားနဲ့ကင်းအောင် ရှင်းအောင်နေနိုင်သူလည်းမရှိပါ။ထိုသို့သောကြောင့် ကျွန်တော်၏ဘလေ့ာဂ်ထဲတွင် အ...
ခွေတွေ ကိုFinalBurnerနဲ့Burne ကြရအောင်။ ဒီကောင်ကတော့ ကြိုက်တဲ့ type ကိုဘန်းလို့ ရတယ်နော်။
ကဲစကားအရှည်တော့ဘူးဒေါင်းလော့လုပ်ကြရအောင်။ ခွေburner ဆိုရင်သိရေ...
ဖျက်ကနဲ ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ အသဲတခါး
သတ္တိတွေက ဘရ်ရရ်မှန်း မသိ
ဘ၀များ၏တစိတ်တဒေသထဲ၌ အပူအပင်အနည်းပါးဆုံးအချိန်သည် ကျောင်းသားဘ၀ဖြစ်သည်။
အေးချမ်းပျော်မွေ့စွာ အများစုနည်းတူ မိုးရည်လှိုင်နှင့်ပပနွယ်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းရောက်...
ထိုအရာသည် ကျွန်မနှင့် မသက်ဆိုင်တော့ပါကြောင်း
စိတ်ကျ ပျက် ထွေ၊ မျက်ရည် ယိုစိမ့်
ငိုသိမ့် တုန်တုန်၊ မယုံ မက်မက်
ယုံ တစ်သက်မျှော်၊ ခက်ချော်ရင်နာ
Toddler Tuesdays: Applesauce Melts
This is so far froma"recipe", seeing as how there's only one ingredient, but it's so kid friendly- you'll thank me.
Landon loves yogurt melts. You know...
လက်ဖက်ရည်ချိန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ မုန့်လုပ်နည်းတစ်မျိုးကို လုပ်ပြချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Strawberry Tart ပါ။ custard ချိုချိုလေးမှာ စတေ...
တလောက တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာမေးပှဲ အောငျစာရငျးတှေ ထှကျတော့ ကိုယျ့တုနျးက အကွောငျးတှေ ပွနျစဉျးစားနမေိတယျ။ အခြိနျတှေ ကုနျသှားလိုကျတာ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာခဲ့ပွီဆိ...
June 17, 2013 The last video taken from PS before the shut down. Pet Society ဂိမ်းကို ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ကစားလာခဲ့တာပါ။ ဒီကနေ့ဆိုရင် ...
ဟင်းတွေကထပ်နေပြီ။ ဘာဟင်းချက်စားရမှန်းမသိတာနဲ့ ပုဇွန်ကို မရိုနိစ် နဲ့ ချက်စားဖြစ်တယ်။ ပုဇွန်ကို အခွံခွာ၊ ကျောခွဲ၊ ရေဆေးပြီး ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နဲ့ နယ်ထားပ...
အမဲသားနှပ် အမဲသားကို ကျမအရင်က လုံးဝမစားပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးချိန်မှာ အမျိုးသားက စားမှန်းကြိုက်မှန်းသိတော့ ချက်ရင:်နဲ့ စားဖြစ်သွားတာပါ။ နိုင်ငံခြားမှာနေရတဲ့...
ချစ်သော မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ စာမရေး ဟင်းမချက်တာ အတော်ကြာပေမယ့် ဘလော်ဂါသူငယ်ချင်းအားလုံးကို အမြဲတမ်း သတိရနေပါတယ်။ ဒီနေ့ ဘူဒယ...
ဘ၀ဆုိုတာပျော်ရာမှာမနေရ တော်ရာမှာနေရ ဆုိုတာလည်းနားလည်ပါတယ်။
ကတက်ချဉ်သုတ်လေးပါရှင်။ ဒီတခါ ကတက်ချဉ်သုတ်ကို မမမာပြောသလို ငါးပိရည်ကျိုလေးထည့်သုတ်ထားပါတယ်။ စုတော့ အငန်ကြိုက်သူမို့ စားရတာ အရမ်းပဲ ခံတွင်းတွေ့ပါတယ်။ ဟင်းချ...
*Creamy Cheese Chocolate Ice Cream*
ဘာလုပ်ကျွေးကျွေး ဂျီးများလှတဲ့ သားကြီးရဲ့ အရမ်းကောင်းတာပဲဆိုတဲ့ ချီးကျူးမှုကို အပြည့်အဝ ရထားတဲ့ ice cream လေးပ...
ကျမ ရဲ့ blog လေးကို လာလည်ကြတဲ့ ချစ်မိတ်ဆွေများရှင်....
ကျမရဲ့ blog ကို လိပ်စာအသစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။ လိပ်စာက
ကြက်သားတွေကို အနေတော်အတုံးကလေးတွေတုံးပြီး ဆားနနွင်းနယ်ထားပါ.. မုန်...
ကြက် သား ပဲ ရည် သုတ် လေး လုပ် စား ဖြစ် ရ တဲ့ အကြောင်း ကတော့ သမီးကြီး က FB မှာကျွန်မ သိတဲံ
ညီမလေး တယောက် ရဲ cooking album ကြည့်ပြီး သူ စား ချင် တဲ့ အကြော...
နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ မှာ မှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ကျင်းပတဲ့  နန်းသက် ၆၀ ပြည့် နှစ် ဆိုတော့ လဲ ကြီး ကြီး ကျယ်
ကျယ်ကျင်းပကြပါတယ်။ စောစောတော့  သွားတာပါဘဲ ကိုယ့် ထက်ဝိရ...
ကြက်အသဲအမြစ်ဟင်း၊ ကန်ဇွန်းရွက် ကြက်အသဲအမြစ်ကြော်နှင့် ချဉ်ပေါင်ဟင်း
ကြက်အသဲအမြစ်ဟင်းကို အသားဟင်းထက် ပိုကြိုက်လို့ အရင်ကတော့ မကြာမကြာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း မချက်ဖြစ်တာကြာပြီမို့ ပြီးခဲ့တဲ့ပိတ်ရက်က ဈေးရောက်တုန်း လိုအပ်မယ...